Layaab Archives - Page 4 of 4 - iftineducation.com
Waxa natiijadan soo saartay khuburada hore u soo daristay raga oo ka hawlgala maxadka sameeyay baaritaankan oo la dhaho Seductionslabs ( laabka soojiidashada). Inkasta oo dumarku ka duwanyihiin raga sida ay u fikirayaan marka ay tahay fikirka ku saabsan galmada ayaa ayaguna ka yaraysan raga. Marka ay tahay dhinaca fikirka galmada ayaa waxa jira cadaadis ka saaran hablaha meel kasta…
WARAYSI: Al-shabaab oo Ku Raad jooga Muqtaar Roobow iyo Gudoomiyaha Gobalka Bakool oo Ka hadlay
Wararka ka imanaya Gobolka Bakool ayaa sheegaya in maleeshiyada ururrka Al-Shabab ay ku dhowaadeen deegaan ay ku tuhunsan yihiin inuu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. HALKAN KA DHAGAYSO WARAYSI Abu Mansuur ayaa dhowaan laga saaray liiska shaqsiyaad si weyn ay u doonaysay dawladda Maraykanka, ayada oo lacag madaxiisa la dul dhigay dib looga laabtay.
Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada Khaliijka ee xiriirka u jaray Qatar ayaa ku hanjabay inay cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogayaan Qatar. Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Ruushka Omar Saif Ghobash ayaa sheegay in suura gal tahay in Qatar ay wajahaan cunaqabateyn dheeri ah. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa horay xiriirka ugu jaray Qatar, iyagoo…